Al-Shabaab oo gacmaha ka jaray labo dhallinyaro ah
Ururka al-Shabaab ayaa fagaare ku yaalla degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxay gacmahooda midigta ah uga jareen laba wiil oo dhallinyaro ah. Labada wiil ee xukunka gacan gooyada ah ay ku fuliyeen al-Shabaab ayaa lagu kala magacaabaa Cali Xuseen Jimcaale oo 24-sano jir ah iyo Cabdi Cabdulle Axmed oo 26-sano jir ah.
Nin sheegtay qaadiga maxkamadda al-Shabaab ee gobolka Galguduud ayaa dadkii la isugu keenay fagaaraha ay xukun kula fuliyeen dhallinyaradaas ka hor sheegay in loo heysto, fal xatooyo ah oo ay ku kaceen.
Toddobaadkii tegay ayaa al-Shabaab waxa ay deegaanka Galhareeri oo hoos taga degmada Ceelbuur waxay fagaare ku yaalla ka fuliyeen laba xukun maalin gudaheed, kuwaas oo isugu jiray dil iyo jeedal.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab waxaa lagu yaqaannaa inuu ciqaabo dadka afkaartiisa gurracan wuxuuna sidaas u sameeyaa si aanan looga soo horjeedsanin xukunkiisa lala yaabay ee ku saleysan aragaggax iyo in si xoog ah lagu xukumo shacabka.